Ogaden News Agency (ONA) – Shaqaalihii Garoomada Itoobiya oo Shaqo Joojin Bilaabay.
Shaqaalihii Garoomada Itoobiya oo Shaqo Joojin Bilaabay.
Posted by Dulmane	/ August 28, 2018
Sida aan qormooyin kaanagii hore idiinku sheegnayba waxaa shaqo joojin sameeyay shaqaalihii gagida dayuuradaha ee magaalada Addis Ababa ama guud ahaan wadanka Itoobiya kuwaas oo kacabanaya mashaar iyo xuquuq la’aan baahsan oo waligoodba haysatay.
Kadib shaqa joojintii shaqaalihii kashaqayn jiray garoomada diyaaradaha ee wadanka waxaa gabi ahaanba istaagay ama gaabis noqday adeegyadii garoomadu ay dadku kuhaysteen, waxaana kala socon waayay howlihii garoonka iyadoo uu xanib kuyimid diyaaradihii soodagayay iyo guwii duulayay.
Shirkada ATCs ee qaabilsan howlaha garoomada ayaa sheegtay in ay shaqo joojin bilaabayso daba yaaqadii todobaadkii hore waxayna shirkadu sheegtay in aysan shaqaalahoodu helin xuquuqdoodii iyo wax udhaw toona.
Sidoo kale waxaa shaqo joojin bilaabay gaadiid layda magaalada Addis Ababa gaar ahaan tagaasida ay dadwaynuhu raacaan kuwaas oo iyaguna cabasho kamuujiyay canshuur xoog leh oo ay dowladu dul saartay.
Tagaasi layda magaalada Addis Ababa ayaa sheegay in ay duruufo adag kushaqayn jireen xiligii uu jiray maamulkii cadaalada xumaa ee hore, waxayna sheegeen in ay maamulkan cusub kafilayeen canshuur dhimis balse aysan kafilaynin canshuur kordhin.
Dowlada Itoobiya ayaan iyadu kahadlin cabashada ay muujinayaan shaqaalaha garoomada iyo waliba gaadiid layda magaalada Addis Ababa, lamana oga in ay xukuumadu xal kumaqan tahayiyo in kale.
Dadka shacabka ah ee kudhaqan wadanka Itoobiya gaar ahaan magaalada Addis Ababa ayaa camal kadhigtay mudaharaado aan kala joogsi lahayn kadib markii dadka loofasaxay xoriyada hadalka iyo in ay waxay rabaan muujiyaan.
Hase yeeshee dadka shacabka ah oo aan utababarayn sida loomudaharaado ayaa kudhaqaaqa waxyaabo sharciga baalmarsan iyagoo joojiya adeegyada caadiga ah sida wax barashada ioo caafimaadka taas oo keenta in iyagana lagu qabto gacan bir ah.